မြန်မာစာ မြန်မာစကား မြန်မာစာလုံးး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » မြန်မာစာ မြန်မာစကား မြန်မာစာလုံးး
မြန်မာစာ မြန်မာစကား မြန်မာစာလုံးး
Posted by ဇီဇီ on Jan 29, 2016 in Arts & Humanities, Community & Society, Education, Literature/Books | 47 comments
မြန်မာစာရယ်လို့ ပြောမယ်ဆို အရမ်းသိတဲ့ထဲ တော့ ကိုယ် မပါပါဘူးးး။
ဒါမဲ့ ခုလောလောဆယ် ဟို အက္ခရာတွေကို ဖြုတ်သင့်မဖြုတ်သင့် ငြင်းနေကြလို့ သူ့ အမြင် ကိုယ့် အမြင်ကို ပြောလို့ရအောင် တင်လိုက်တယ်။
ကိုယ့်သဘောဆိုရင်တော့ ဖြုတ်ဖြုတ်, ဆက်သင်သင် သူငယ်တန်း တစ်တန်းထဲ ဖြုတ်မှာတော့ သဘောမတွေ့။
မဖြုတ်လို့ရော ဘာပိုတတ်မတုန်း တော့ မသိဘူးပေါ့နော့။
ကိုယ်တုန်း ကတော့ ၅ တန်းလောက်ထိ ဋ ဌ ဍ (၃) ကောင်ကို ရေးဖို့ ဖတ်ဖို့ လည်နေတုန်းး…
၅ တန်း ဆရာမက အလွယ်မှတ်နည်းး ရှေ့၂ ကောင် ခြေထောက်ချင်း ကန်ကြတာကို လှည့်ကြည့်တာတဲ့။
အသံထွက်ကတော့ တ ထ ဒ နဲ့ တူသလေ။
ကောင်းကောင်းမကြွ လှမ်းကန်သဗျ ??
အလယ်က ကြွတဲ့ ကိုရင်ကိုများ
Back Kick လေးနဲ့လှမ်းတွယ်သဗျိုးး???
ဟာ ဟာ ဟာ့
ကြားဖူးတာက မြန်မာ စာလုံး/အက္ခရာ မှာ အကြီးအသေး ရှိတယ် ဆိုလား ဘာလားး
ခု ဖြုတ်မဲ့ ဆိုသူကရော မြန်မာ စာ မြန်မာစကား မြန်မာ စာလုံး ဘယ်လောက် တတ်တုန်း ကျွမ်းကျင်တုန်းတော့မသိ။
ဖြုတ်ရေးမဖြုတ်ရေးထက် လုပ်ချင်တာ လုပ်ခဲ့တဲ့ အရေးကို ကျနော်က ပိုမကြိုက်တာ။
ဖျက်ရသည်မှာ လွယ်ပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်တတ်ပြီထင်၍တော့ မဖျက်စေချင်။ ဘာသာစကားသည် လူမျိုး၏ အသက်ဖြစ်သည်။ (Credit)
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်၌ စတင်ပြဋ္ဌာန်းမည့် သူငယ်တန်းမြန်မာစာ သင်ရိုးသစ်တွင် ဗျည်းအက္ခရာ ရှစ်လုံးဖြုတ်ပြီး သင်ကြားမည့်အပေါ် အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေ သူငယ်တန်း မြန်မာစာသင်ရိုးသစ်၌ ဗျည်း ၃၃ လုံးအနက် ဃ၊ ဈ၊ ဋ၊ ဌ၊ ဍ၊ ဎ၊ ဏ နှင့် ဠ စသည့် ဗျည်းရှစ်လုံးအား ထည့်သွင်းသင်ကြားတော့မည်မဟုတ်ဘဲ ကျန်သည့် ဗျည်း ၂၅ လုံးကိုသာ သင်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ သူငယ်တန်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းသစ်၌ သင်ကြားရန်ချန်လှပ်ခဲ့သည့် ဗျည်းရှစ်လုံးအား ပထမတန်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းသစ်တွင် ထည့်သွင်း သင်ကြားမည့်အပေါ် ဝေဖန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “အစဉ်အလာအရဆိုရင် ဗျည်း ၃၃ လုံးကို သင်လာခဲ့ရတာပါ။ အခုကျတော့မှ ဘာဖြစ်လို့ လာပြောင်းချင်ကြရတာလဲ။ ဗျည်း ၃၃ လုံးကို သူငယ်တန်းမှာ သင်လို့ရတယ်ဆိုတာကို ၁၉၆၈-၆၉ တုန်းက ပညာရေး သုတေသနဗျူရိုကနေပြီးတော့ သုတေသနစာတမ်းသုံးစောင် တင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီစာတမ်းတွေအရ သူငယ်တန်းမှာ ဗျည်း ၃၃ လုံးအပြင် သရရှစ်လုံးကိုပါ တွဲသင်လို့ရတယ်ဆိုပြီး အခုအချိန်အထိကို သင်လာခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒါကိုမှ ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းချင်ရတာလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ရော သုတေသနအထောက်အထား လိုအပ်ပါတယ်။ သုတေသန အထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့ အစဉ်အလာတစ်ခုကို ဖျက်တာဟာ အခြေခံပညာရဲ့ အခြေခံအဆင့်ဖြစ်တဲ့ သူငယ်တန်း ပညာရေးကို ဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ဥပမာ က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င မှာ ဃ ကို ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် ကလေးတွေအနေနဲ့ သံဃာဆိုတဲ့ အသံထွက်ကို ဘယ်လိုသိနိုင်တော့မှာလဲ။ အလားတူပဲ စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ဈ၊ ည မှာလည်း ဈကို ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် ကလေးတွေအနေနဲ့ ဈေးဆိုတဲ့အသံကို ဘယ်လိုထွက်တတ်တော့မှာလဲ။ အဲဒီတော့ ဒါတွေကို ဖျောက်ခြင်းဟာ မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ သန္ဓေကို ဖျက်ဆီးပစ်တာပဲလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာကတော့ သူငယ်တန်းမှာ ဒါတွေကို မသင်ဘဲ ချန်ထားခဲ့မယ်ဆိုတာကို ကန့်ကွက်ပါတယ်။ လက်မခံချင်ပါဘူး။ မြန်မာစာပေရဲ့ တန်ဖိုး၊ မြန်မာစာပေရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ မြန်မာစာပေရဲ့ ရသကို ဖျက်ဆီးပစ်တာနဲ့ အတူတူပဲမို့ အနှစ်သာရကလည်း ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ ကျောင်းကိုရောက်ကာစကလေးတွေရဲ့ အသိစိတ်မှာလည်း မြန်မာဗျည်းဟာ ၃၃ လုံးမဟုတ်ဘဲ ၂၅ လုံးပဲရှိပါလားဆိုတဲ့ လွဲမှားတဲ့ အသိရောက်သွားရင်လည်း မြန်မာစာပေရဲ့တန်ဖိုး အစဉ်အဆက်ဟာ ပျက်စီးသွားပြီပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဆရာတို့ အကြိတ်အနယ် ကန့်ကွက်ပါတယ်။ လက်မခံပါဘူး။ သဘောမတူပါဘူး”ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အခြေခံ ပညာဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးငွေတိုးက ၎င်း၏အမြင်အား ထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။ သတင်းအပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန် >>>>> http://goo.gl/vFEXYr
ဆြာ အုပ် က တော့ ဂလို သဘောထားသတဲ့။
ဟို ခက်တဲ့ ဗျည်းတွေ သူငယ်တန်းမှာ ချန်မယ်ပြောတာ တော့သဘောတူတယ်… အဲဒီ ဟာတွေက ခက်ရုံမက ခုတောင် keyboard ဘယ်နားရှိမှန်းမသိဘူး
ဃ – သံဃာ လို့ရေးမှ ပဲ သုံးဖူးတယ်
ဈ- ဈေးလို့တော့ရေးပေမယ့် စလုံးကို ရပင့်လိုက်တာပဲ
ဋ – ဇော်ဝင်းထွဋ် နာမယ်ပေါင်းမှ သုံးတယ်
ဍ – ကရကဍ် တို့ မကိုဍ် တို့နေရာမှာ သုံးတယ်ထင်တာပဲ မရေးဘူးဆုံးပဲ
ဎ – (keyboard မှရှာလို့မတွေ့- မသုံးလို့ ဘယ်နားလဲဆိုတာမသိတာ)
ဏ- ခဏ တို့ဘာတို့မှတော့သုံးတာပဲ
စိတ်ထဲရှိရာပြောရရင်တော့ အာ့တွေမရှိရင်အကောင်းဆုံးပဲ.. ဟီဟိ
ဥ နွေဦး အမြင်ကတော့ ဂလို။
စာ စသင် ကထဲက ဗျည်း ၃၃လုံး ကို သုံးသည် ဖြစ်စေ မသုံးသည် ဖြစ်စေ သင်ရပါမယ်.. အမေမွေးခါစက မသုံးတဲ့ ဂွေးဇိကို မလိုရင် ဖြုတ်ထား ကြီးလို့ လိုမှ ပြန်တပ်မယ် ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး
ကိုမှော်(ဆရာ) ကတော့ ဆြာအုပ် ပြောတာ သဘောတူထားသဗျ။
လေသံဖမ်းတ၇ားနာ မြန်မာစာပျက်မလောက် ဖြစ်နေကြတာ။ က ကနေ အ အထိေ၇းခိုင်းေ၇ာင်ဝါးဝါးဖြစ်နေကြမှာပဲ။
ကျနော့ ယောက်ခမ ဆာ ကတော့ ဒီလိုထင်မြင်သဗျ။
မြန်မာစာ စကား တွေကို မော်ဒန်ဖြစ်စေချင်ပုံလားမသိ ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အက္ခရာပုံစံတွေနဲ့ရေးထုံးတွေ ဝေါဟာရတွေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်ပြောင်းလဲလာကြတာဆိုတော့လည်း … အခုမဟုတ်ရင်လည်း တနေ့တော့ ပြောင်းဦးမှာပါ ။
ကာလတစ်ခုကြာရင် အခုအရေးအသားတွေဟာလည်း ပုဂံခေတ်ကျောက်စာလို ဖြစ်သွားနိုင်တာဆိုတော့ ….
တစ်ခုဘဲ .. ပြောင်းလို့ဘယ်လောက်အကျိုးရှိမလဲဆိုတာပါဘဲ ။
ဘာသာစကားနဲ့ စာပေဆိုတာ အများက တူညီစွာလက်ခံကျင့်သုံးမှသာ အောင်မြင်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးသင်္ကေတတွေဖြစ်လာမှာပါ ။
အားလုံး သဘောတူကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ အပြောင်းအလဲတိုင်းမှာ ညင်သာချောမွေ့ဖို့ဘဲလိုပါတယ် ။
ဆရာဇော်ဂျီတို့ သိပ္ပံမောင်ဝတို့လည်း ခေတ်စမ်းစကားပြေခေတ်မှာ အတော်လေး တော့ရုန်းကန်ခဲ့ကြရတာပါဘဲ ။
ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုပြောရ ရင် ….
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ရှစ်ဆယ်လောက်က ဟံသာဝတီတိုက်ထုတ် ပုံနှိတ်မူတွေနဲ့ အခုခေတ် ပုံနှိတ်မူ အရေးအသားတွေ မတူတော့သလိုပေါ့ ။
ပြောင်းတိုင်း ကောင်းတာမဟုတ်ပေမယ့် တစ်နေ့ကျရင်တော့ အနိစ္စ သဘောနဲ့ ကိစ္စချောနိုင်တာမို့
ဒီကိစ္စမျိုးကျတော့ ကျုပ်တို့က ကွန်တစ်ဟုတ်တော့ဘူး လစ်လစ်ဖြစ်သွားဘီ
ဆာဆာ့ ကို ထောက်ခံသူက ရွှေကြည် ပါ။
အူးဆာကိုထောက်ခံတယ်ဗျ မြန်မာစာ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲပုံဆိုတာ သင်ဘူးတာလား ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးတာလားတော့မသိ အဲ့ဒါကြည့်ပြီး ကာလရွေ့လျောလာရင် အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုတာ လက်ခံနိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးရခဲ့တာ…
ကိုကမ်းဝေး အပြောကတော့ ဂလို ရှင်းပါတယ် ခည။
လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ အဓိက အဆင့်အတန်းက အက္ခရာပဲလို့တော့ ထင်တာပဲ…
ဘာတွေကို ကာကွယ်နေကြတာလဲ စဉ်းစားလို့မရ
အလုပ်မရှိ ( ) သန်းရှာ
ငါးရာငါးဆယ် နိပါတ်တို့ ဘာတို့ မဖတ်ခဲ့ပါဘူး
၀ါကျ တစ်ကြောင်းရဲ့ အနှစ်သာရကိုမှ နားမလည်ဘဲကိုး
အသစ်ထွင်တာ အဟောင်းဖျက်တာက ပါလာချည်သေး
ကျန်တဲ့သူ အမြင်တွေ ပြောခဲ့ကြပါအူးးး
အခုက မူကြိုကလေးငယ်တွေပါပဲ ခဏဖြုတ်ထားခဲ့မှာပါတဲ့။ နောက်အတန်းတွေမှာ ထည့်သင်မှာလို့ ပြောတယ်။ ဒီအတိုင်းကြီး ဖြုတ်ပစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျတော့်အနေနဲ့ လက်ခံ နိုင်ပါတယ်။
ဖြုတ်လို့ ဘာထူး လည်း စဉ်းစားမရဘူးး
ခရက်ဒစ် – ဦးကျော်နိုင်
*အက္ခရာ သုံးဆယ့်သုံး ကိုတဲ့၊
တစ်ဆက်လုံး လူမဆံ တယ်၊
မူမမှန် ဥာဏ်နဲ။ ။
*ဗျည်းရှစ်လုံး ဖယ်ထုတ်ချန် ကာ၊
ကွယ်ငုတ်ရန် လုပ်ကြသည်ပဲ။ ။
*မူရင်းမှ မပါရင် ဗျာ၊
မရှင်းဘဲ ဖြစ်မှာ။ ။
*ကလေးတွေ သင်ဦးစ က၊
မြင်ဖူးမှ သင့်လောက်ယုံပါ။ ။
*လက်ဦးက စိမ်းခဲ့ပါ လျှင်၊
တိမ်းရွဲ့ကာ အမှတ်လွဲ လို့၊
ပယ်ဖြုတ်မဲ့ ဦးနှောက်တွေ ရယ်၊
ထုံးမြောက်ပေ ဥာဏ်ကြီးလှလေး။ ။
ထင်မြင်ချက် မရေးရဲ မရေးရက်ပါ။
တတလင်းချိတ်၊ ထဝမ်ဘဲ၊ ဒရင်ကောက်၊ ဒရင်မှုတ် နဲ့ လကြီး ကို မနည်း ဘယ်ကိုရင် က ဘယ်နားနေပြီး ဘယ်လို ခေါ်တယ် ဆိုတာတောင် အခုမှ မှတ်ဥာဏ်ထဲကနေ ဖြစ်ညှစ်ထုတ်နေရတဲ့ ဘဝ ဆိုတော့ကာ….း)
နာကတော့ ၃၃ လုံး လုံး သိရုံလောက်ပဲ။ အထေ့အငေါ့မရှိ လက်ရေးနဲ့ (တိုင်ပင်နဲ့ ဟုတ်ဘူး) ရေးနိုင်ရုံလောက်ပဲ ရှိတာ ဆိုတော့ ကျန်တာ မပြောရဲပါဘူးးး
ဘယ်လောက် မြန်မာစာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တတ်ကျွမ်းလို့ ဆုံးဖြတ်လည်းတော့ မသိဘူးပေါ့အေ။
သီချင်းလေး ဆို သွားတယ်။
ဗျည်း ၈ လုံး ပြဿနာ
အခုကခေတ်စားနေတာ　မြန်မာစာ　ဗျည်း　၃၃　လုံးကို　ပြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဗျည်း　၃၃　လုံးကို　ဒီအတိုင်းပဲထားမှာပါ။ရှင်းရှင်းပြောရရင်..တိုးမှာလည်း　မဟုတ်သလို..လျော့မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။သို့သော်　ဗျည်း　၃၃　လုံးထဲက　၈　လုံးကိုသူငယ်တန်းမှာထည့်သွင်းသင်ကြားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ
ကျောင်းနဲ့　စ　ထိတွေ့တဲ့အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို　အချိန်မှာ　ကလေးအတွက်　အရမ်းကြီးခက်ခဲလေးလံတဲ့　အမှုမျိုးကို　မပြုအပ်ဘူး။ဒါကပညာရေးနယ်ပယ်အတွက်ရော၊စိတ်ပညာအရရောပေါ့။
မြန်မာစာရေးနည်းက　”၀”လုံးကို　အခြေခံပါတယ်။ကျွန်တော်တို့　ငယ်ငယ်ကလည်းသင်ဖူးကြတာပဲ။စာရေးသင်တဲ့အခါ..က..ကြီးကို　အရင်သင်လား..၀　လုံးကို　အရင်သင်လား။ဒီတော့မှ..၀　လုံးက　တစ်ဆင့်..ထ　ဆင်တူး..။ထဆင်တူးမှ..တ၀မ်ပူ…ဂငယ်..စသဖြင့်　တစ်ဆင့်ခြင်းသွားတာပါ။ပြီးတော့　သူငယ်တန်းဆိုတဲ့အရွယ်ဟာ　ခဲတံကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်း　မကိုင်နိုင်သေးပါဘူး။အကြောင်းကတော့　သူတို့　လက်ချောင်းကြွက်သားကလေးတွေသန်မာမှုမရှိသေးလို့ပါ။ဒီတော့သူတို့လက်ချောင်းကြွက်သားကလေးတွေ　သန်မာမှုရရှိဖို့က　ပထမအရေးကြီး
ဆောက်တာမျိုး..စသဖြင့်　လက်ချောင်းလက်ဖ၀ါးအသုံးပြုရတဲ့　ကစားနည်း)
ပြီးတော့..သူငယ်တန်းမှာ　မသင်သေးဘူးဆိုတဲ့..ဗျည်း　၈　လုံးကို　ကြည့်ကြည့်ပါ။၀လုံးကနေဆင့်ပွားအခြေခံထားပေမယ့်..အတွန့်အတက်တွေနဲ့ဆိုတော့ရေးဆွဲဖို့ရာ.သူငယ်တန်းအရွယ်ကလေးငယ်ကိုအခက်တွေ့စေပါတယ်။ကလေးဆိုတာ　ခက်အခဲတွေ့ရင်ရှောင်ချင်တယ်။စာသင်ကျောင်းပေါ်မှာ　ပျော်ရွှင်စီးဝင်မှု　မရှိတော့ဘူး။ဒီအချက်တွေကို　ရှောင်ရှားချင်တာကြောင့်　သူငယ်တန်းမှာထည့်သွင်းမရေးဆွဲစေဘူး..ပထမတန်းကမှ　စသင်
မယ်ဆိုတဲ့　အခြေအနေဖြစ်လာတဲ့သဘောပါ။အထူးသဖြင့်　သူငယ်တန်း
သင်တဲ့ဆရာ/ဆရာမတွေ　ဒီအခက်အခဲကို　သိကြပါတယ်။သင်ကြားပေးတဲ့
ဆရာအတွက်လည်း　ခက်ခဲတယ်။သင်ကြားတဲ့ကလေးအတွက်လည်း　ခက်ခဲတယ်။ဒီတော့　နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးအတွက်　သူငယ်တန်းမှာသင်ကြားရေးဆွဲခြင်းမပြုစေပဲ　ရှောင်ရှားတာလို့　တွက်ဆလို့လဲရနိုင်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်က　ရိုးရှင်းပါတယ်။
ဒါက　မြန်မာစာပေကိုဖျက်ဆီးနေတာမဟုတ်သလို၊မြန်မာအက္ခရာတွေကို　လျော့နည်းစေတာမဟုတ်ပါဘူး။”စဉ်းစား　ချင့်ချိန်　သုခမိန်”ဆိုတဲ့　စကားအဓိပ္ပာယ်ကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ကြစေချင်ပါတယ်။စဉ်းစားပါ။တွေးတောပါ။DVB က သက်သက်မဲ့ ဖွတာပါ။မီဒီယာတွေ　ငါးစာချရာဘက်မှာ..ပွက်လောရိုက်နေတာ　မြင်မကောင်းလို့ပါ။
ABCD ထဲက.. တခုခုကို ကလေးတန်းမှာ ဖြုတ်ပြီး… နောက်မှပြန်ပေါင်းသင်မယ်ဆိုရင်ကော ဖြစ်နိုင်သလားဟင်င်င်… ဖြစ်မယ်ထင်သလား…. ဟင်င်င်…။
အဲဒီ သဘောပဲ လေ။
ဘယ်ဉာဏ်ကြီးရှင်က စ လည်းတော့ မသိ။
အမှန်ဆို ၃၃ လုံးစလုံး မသင်ရ မရေးရ ရင် ပိုမကောင်းဘူးလားငင်??
ဗျို့…သူကြီး.. A ကနေ Z အထိ အက္ခရာတွေထဲမှာ… မြန်မာ အက္ခရာ ဋဌဋဃဠ တို့လိုမျိုး..
ငါးနှစ်ခြောက်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေ ဥာဏ်မီဖို့ ခပ်ခက်ခက်အက္ခရာ ပါလား…
ကလေးတန်းမှာ ဖြုတ် ချန်ထားစရာ အက္ခရာ မပါလို့…မချန်တာမဟုတ်ဘူးလား။
.မြန်မာနဲ့ အင်းဂလိပ် မတူဘူးနော့…
အမေရိကားက ငါးနှစ်ခြောက်နှစ်အရွယ် အမေရိကန်သားပေါက်လေးတွေ ကို ဋဌဋဃဠ ဆိုတာတွေကို.. ရေးပဲ ရေးခိုင်းကြည့်ပါအုန်း…
၃၃ လုံးလုံး ခက်တယ်လေ
မြန်မာစာ က မကြာခင် ပျောက်ကွယ်တော့မှာပါ။
ဘယ်သူမှ မတတ်နဲ့ ကောင်းတယ်ဟေ့။
နာ တတ်ရင် ပြီးပြီ။
နာ့ မျိုးဆက်ကို မြန်မာမသင်ဘူးး
ဘာသာစကား တစ်ခု မှာ စာလုံး အသုံးအနှုန်း တိုးအောင် ကျယ်ပြန့်အောင် လုပ်ရမယ်ပဲ သိထားတော့
စာလုံးလျှော့ သင်ဖို့ စတင်တဲ့ ခြေလှမ်းကို လိုက်မမှီဘူးး
သများ ခေတ်နောက် အရမ်းကျနေသလား ??
သိလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး ပြောကြည့်ဆိုလို့ပါ မှားနေရင်လည်း ပြင်ပေးကြပါ
ဖြုတ်တာကို လက်သင့်ခံပါတယ်လို့ ဘာလို့လဲဆိုတော့
ကလေးငယ်လေးတွေကို အရွယ်နဲ့လိုက်အောင် ၀န်မပိအောင် သင်ယူဖို့ဆိုရင် စာစသင်တဲ့နှစ်မှာ အဲ့ဒီအက္ခရာ ၈ လုံး ဖြုတ်တာ ဆီလျော်ပါတယ်
အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ အေဘီစီဒီတောင်ab cdဆိုတဲ့ အသေးစာလုံးနဲ့ ABCD ဆိုတဲ့ အကြီးစာလုံးမှာ အသေးကိုစသင်ပြီး တလုံးကိုပဲ သေချာမှတ်သိပြီးမှ အကြီး ABCD ကိုသွားရတာပါ
တပြိုင်ထဲနဲ့aA အသေးအကြီး ၂ ခုတွဲမှတ်ရင် ကလေးအတွက် ခက်ခဲပင်ပန်းလို့ စာကြောက်တတ်ပါတယ်
အခုလည်း အလားတူပါ သူငယ်တန်း မှာ အခက်အက္ခရာ ၈ လုံးဖြုတ်ပေမဲ့ ပထမတန်းမှာ ဆက်သင်မှာဖြစ်ပြီး အတန်းအလို အရ ၁၂ တန်းအထိရောက်သွားမှာမို့ ဖြေးဖြေးချင်းညှိုရင်း ကောင်းမွန်တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတခုဆီ ဦးတည်သွားမှာပါ
ဟိုအရင်ခေတ် သူငယ်တန်းလေး သူငယ်တန်းကြီးဆိုပြီး ၂ တန်း ရှိတယ် ပြီးမှ ပထမတန်းဆိုပြီးတက်တာ
နောက်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိ သူငယ်တန်း ၁ တန်းပဲ ရှိတော့တယ်
နောက်တခုက မြန်မာစကားလုံးတွေ မလိုအပ်ပဲ နှစ်လုံးဆင့်ဖြစ်နေတာတွေ ရှိပါတယ် တက္ကသိုလ် ကိုရိုးရိုးတန်းတန်း တက်ကသိုလ် လို့ရေးလည်း မှန်ပါတယ် နှစ်လုံးဆင့်တဲ့သဘောက ပါဠိစာကို အားကျလို့ လှစေချင်လို့ တုသုံးတာပါ အဓိပ္ပါယ်တူပါကြောင်း ( အဓိပ်ပါယ် ရေးရင်တွေ့ပြန်ပြီ )
တော်ပါပြီ ဆက်ပြောရင် ပြီးမှာ မဟုတ်တော့ဘူး
အဓိကကတော့ ငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ် မှာ သူနဲ့သင့်တော်ဆီလျော်တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကို အမှန်တကယ်ထိရောက်တဲ့ နည်းနဲ့ လိုတိုးပိုလျော့လုပ်ယူရမှာပါ
သို့သော် ရှေးမူမပျက်ချင်တဲ့သူနဲ့ အပြောင်းအလဲကိုသွားချင်တဲ့သူနဲ့ နေရာတကာ ထိပ်တိုက်တွေ့ရမှာမို့ ဒီကိစ္စကလည်း ဒီလိုပဲ ငြင်းရင်းခုန်ရင်း သွားပါလိမ့်မယ်
တကယ်တမ်းတော့ အပြောင်းအလဲဆိုတာ အပြောလွယ်သလောက်အလုပ်ခက်ပါတယ်
အာ့လို ညှိ ယူကြေး ဆို ဂလိုသင်ရင် ကောင်းမယ်။
တစ်တန်း တစ်တန်း ကို ၅ လုံးလောက်ဆီပဲ သင်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်။
ကနဦးသင်ကြားမှုအတွက် ကလေးကိုသိသင့်တာပဲ မိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ ဆိုလိုရင်းပါ
မြန်မာစာမှာ အဲ့ ၈ လုံးကို ဖြုတ်မယ်လို့ ပြောတာမှ မဟုတ်ပဲ
အခုလတ်တလောတော့ ဘာတွေ နားလည်မှုလွဲနေလဲတော့ မသိဘူး လိုင်းပေါ်မှာ အုန်းအုန်းကိုထလို့
ကိုယ်ကလည်း ကိုယ်ထင်ရာတွေ လျှောက်လျှောက်ပြောတာ လိုင်းပေါ်မပြောရဲလို့ ရွာထဲဝင်ရွှီးသွားတယ်
အမှန်တော့ သများ တရက် ထမင်း ၃ နပ်မှန်ဖို့ လောက် အရေးကြီးတယ်မထင်ပါဘူးး
ကိုယ့်ကလေးလည်း မြန်မာ စာမသင်တော့ဘူး (အတည်ပြောတာ)
ဒါမဲ့ ပညာရေးမှာ လုပ်ချင်ရာလုပ်နေကြပြီး ကလေးတွေ အတွက်လို့ လွှဲချနေတာ ကာကွယ်နေတာကို နားမလည်တာ။
“ပညာရေးမှာ လုပ်ချင်ရာလုပ်နေကြပြီး ကလေးတွေ အတွက်လို့ လွှဲချနေတာ ကာကွယ်နေတာကို နားမလည်တာ။”
ဒါကတော့ အမှန်ပါ သူတို့ဖျက်ချင်တိုင်းဖျက်လို့ ပျက်ခဲ့တာကြာပေါ့
အခုခေတ်မှာ ဘိုကျောင်းနေတဲ့ ကလေးတွေ မြန်မာစာကပ်ဆိုက်တာ အတော်တောင်ကြာပေါ့ ဘိုရူးရူးခဲ့ကြတာလေ
အခုနောက်ပိုင်းမှာ အဲ့ပြသာနာ မသေးမှန်းသိလို့ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေကြပြီ
သူငယ်တန်းမှာ ချန်မယ် ဆိုတာကို ဘာလို့ ကတ်ကတ် ထလန်နေကြလဲ မသိ။
အဲ့အက္ခရာတွေကို မြန်မာစာ သဒ္ဒါကျမ်းထဲက ထုတ်ပစ်မယ်လို့ပြောတာမှ မဟုတ်တာ။
အခု မြင်နေရတာတော့ အဲ့ဒီအက္ခရာတွေကို မသုံးရတော့ဘူးလိုလိုနဲ့ အဲ့ဒီအက္ခရာတွေနေရာမှာ ဘယ်လိုရေးရပါ့ဆိုပြီး လျှောက်အော်နေကြတာ။
ဘာလို့များ အဓိပ္ပါယ်ကောက် လွဲကုန်ကြပါလိမ့်။
အဲ့ဒီအက္ခရာတွေကို မြန်မာစာ/သဒ္ဒါမှာ အသုံးမပြုရ ဆိုတဲ့ ဥပဒေထွက်လာရင်သာ အခုထက်မက အုတ်အော်သောင်းတင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြရမှာ။
အခုက သူငယ်တန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ ဘာမှန်းသေချာမသိတဲ့ အက္ခရာခပ်ခက်ခက်ကြီးတွေကို မသင်ရသေးတာလေးပါပဲ။
သူငယ်တန်းအဆင့်ထက် မြင့်သွားတဲ့အချိန်ကျရင် ပြန် သင်ပေးမှာပဲ။
အဲ့ဒီအခါကျရင် ပိုတောင် နားလည်လွယ်သွားဦးမယ်ထင်တယ်။
ဆိုတော့ ဒီကိစ္စ ကျနော် သဘောတူတယ်။
အေး မြန်မာသဒ္ဒါ ဖွဲ့ထုံးထဲ ဒီအက္ခရာတွေ ထုတ်နှုတ်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျရင် သာ အခု လက်ခမောင်းထ ခတ်ကြသလို ထခတ်ကြပေတော့။
နောက်ပြီး. . .
နှုတ်သည် ဖြုတ်သည်ဆိုဦးတော့ နှုတ်သင့် ဖြုတ်သင့်ကြောင်း အကြောင်းအကျိုးခိုင်လုံရင် လုပ်သင့် လုပ်ရမှာပဲ။ အဓိကက မြန်မာစာ/စကား အခုလက်ရှိထက် ပို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့။
(ဦးဖေမောင်တင်တို့ ရှိရင်လည်း မလိုတာဖြုတ် လိုတာထည့် လုပ်ကြမှာပဲ။)
အခုက အသစ်လည်း မထွင်နိုင်တဲ့အပြင် အဟောင်းထဲမှာတင် ပိတ်မိနေကြသလားလို့။
ဖြုတ်သင့်ရင်ဖြုတ်…(အပြီးအပြတ် ဖြုတ်ဖို့ကို ဆိုလိုသည်။ ခဏတာ ဖြုတ်တာကတော့…ဘာမှ ပြသနာမရှိ)
ဖြုတ်ဖို့ စဉ်းစားသူက ဘယ်သူတုန်းး
ဘယ်လောက် တတ်တဲ့ ပညာရှင်တုန်း မသိဘူး။
သူငယ်တန်း က အရေးကြီးမကြီးဆုံးဆိုပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်နေရင်တော့
ဆိုတော့…ကျနော့်ကျေးဇူးရှင် ဆရာဇော်ဇော်အောင်…မကြာခဏ အော်ဟစ်ခဲ့သလိုပဲ…ပြောရမှာပဲ…
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ… စာပေ သဘောတရားရေးရာတွေအတွက်…. ထိထိရောက်ရောက်
ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထပြောမယ့်သူ မရှိသလောက် ရှားနေပါတယ်။
သဒ္ဒါဖွဲ့ထုံးတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး… လုပ်သင့်တာ ပြောသင့်တာကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်(သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကြီး) လုပ်ဖို့ ပြောဖို့…ဆိုင်ရာနယ်ပယ်က လူစွမ်းကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့… တော်တော်လိုနေပါတယ်။
အများညီ ဤကျွဲဖတ်နေရာက… ညီကို မညီလို့… ဤနဲ့ကျွဲကို မသုံးရ ဆိုတာမျိုး
.ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း ရွေ့လျားနေတာကြီးကိုတော့ဖြင့်…. တိုးတက်မှုလို့ မဆိုနိုင်ရေးချ မဆိုနိုင်။
ကျနော်ကတော့ ဒီအချိန်မှာ (ဒီအချိန်မှာ) မော်ဒန်/ပိုစ့်မော်ဒန်အယူအဆတချို့ကို လက်ကိုင်ထားနေသူမို့ … သဒ္ဒါဖွဲ့ထုံးတို့… ဘာသာစကား အက္ခရာတို့ကို…
ဂရုကို မစိုက်ရေးချ မစိုက်…
.ဖြစ်ချိန်တန်ရင် ဖြစ်လာတဲ့ သဒ္ဒါဖွဲ့ထုံး(အက္ခရာတွေ)ကို.. သုံးချင်ရင်…ယူသုံးမှာဖြစ်ပြီး..
အကုန်သိပြီး မှ မသုံးချင်လို့ မသုံးတာနဲ့။
မသုံးချင်လို့ အကုန်တတ်အောင် မသင်တော့တာနဲ့ မတူဘူးထင်ပါရဲ့ကွယ်
အခုက… မသုံးချင်လို့ အကုန်တတ်အောင် မသင်တော့တာ ဆိုတဲ့အနေအထားထိ…
.ရောက်ကို မရောက်သေးဘူး မဟုတ်လားဟင်။
သုံးရမယ်.. သင်ရမယ်…(အပြီးအပိုင် ဖြုတ် ဖြတ် လိုက်ပြီလို့ မပြောဘူးလားလို့)
သူငယ်တန်းမှာ ခန ချန်ထားပြီး ပထမတန်းမှာ သင်ရမယ်…
ဒါပဲ မဟုတ်ဘူးလား ။
ဘာလို့ သူငယ်တန်းမှာ ဖြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့
ဘယ်လို ပညာရှင်က ဒီလို ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကို နားမလည်တာ။
ဖြုတ်မဲ့ဟာ အတော်များများကတော့ဘုန်းကြီးစာအုပ်ထဲပါတဲ့ စာလုံး
နေ့စဉ်သုံး ကီးဘုတ်လက်ကွက်တွေမှာ အလွယ်မတွေ့နိုင်တာပေါ့
သိပ်မှ အသုံးမလိုသလို အစားထိုးသုံးစရာလဲ ရှိနေတာပါပဲ ကျင့်ယူဖြည့်သုံးလဲ ရပေမည်ပေါ့
ဒါပေသိ စနစ်တကျ စမ်းစစ်ခြင်းမပြုခဲ့ပဲနှင့် အလျင်စလို ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်သည့် အပြင်
ရှေးစွန်းစွဲများ ထူပြောရာ ဌာနေကြီးပါဖြစ်နေ၍
ဤ ကိစ္စ အကောင်ထည်ဖေါ်ခဲ့မည်ဆိုလျင်တော့
ထုံးစံအတိုင်း လမ်းမပေါ်ထွက် ရှုပ်ရှက်ခတ်နေမှာ
မလွဲဧကန် မုချ အမှန်ပင် ဖြစ်လာချေတော့မည် တမုံ့။
ကြိုက်ဒလိုလုပ် ခုလဲရေးချင်ဒလို ရေးနေဒါဘဲ ငှင်းငှင်း
စနစ်တကျ စမ်းစစ်ခြင်းမပြုခဲ့ပဲနှင့် အလျင်စလို ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်သည့် အပြင်
မြောက် ကို ချစ်တာ အဲဒါ။
အဲလို အနှစ် ပြောနိုင်လို့။
ငယ်ငယ်ကထဲက.. မြန်မာစာကိုချစ်လို့လေ့လာဖူးတာတွေထဲမှာ.. အဲဒီအက္ခရာ ၃၃လုံးက… အရေးကြီးတယ်..။
ကခဂဃင .. အာခေါင်အစလေးက ထွက်တဲ့အသံ..
စဆဇဈည … ပါးစပ်အတွင်းပိုင်းလျှာခတ်တာရောက်လာ…
အစအဆုံးမှာ.. သဘောက.. ထုတ်ပြတယ်.. ပြန်သိမ်းတယ်တဲ့..။ က စလိုက်တဲ့.. လျှာခတ်နေရာနဲ့.. အ အဆုံးသတ်တဲ့.. အာခေါင်တွင်းနေရာမတူ..။
ဆိုတော့.. နောက်တခုက. .ဟပ်ထိုး.. -ှ
သူလည်း.. အဲဒီလိုပဲ…။ အက္ခရာ ၃၃လုံးမှာ.. ။ င ကစလို.. ယ အထိ.. -ှ ဟပ်ထိုးတခုဆွဲကြည့်.. အဲဒီလိုင်းဖြတ်သွားတဲ့ အက္ခရာ.. အကုန်.. -ှ လို့ရတာတွေ..။ ကျန်တဲ့ အက္ခရာတွေမရ…။
ဒီ စာလုံး ၃၃ လုံး က အဓိပ္ပယ်မဲ့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ပြန်ရှာအူးမယ်။
ခွဲဖို့ စဉ်းစားမိတဲ့ ခေါင်းရွှေချထားချင်တာ။
သင်ယူမှုနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခါစ သူငယ်တန်းကလေးတစ်ဦး၏ စိတ်ထဲမှာ….
ဗျည်း(၃၃)လုံး ရှိတာကို (၂၅)လုံးလို့
၀လုံးကိုပင် မရေးတတ်သေးသော အသက်(၅)နှစ်တင်းတင်း ပြည့်သော ကလေးငယ်အယောက် (၃၀)ကို
ဗျည်း(၃၃)လုံးကို ကျေညက်အောင် လက်ရေးလှအောင် သင်နိုင်ပါတယ်။
တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ အခြားဘာသာရပ်များကိုလည်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။
ဗျည်းသင်ခန်းစာများကို ကျေညက်ပြီ ဆိုလျှင်ဖြင့် သင်ခန်းစာများ ဖတ်စာများကို လိုသလို ပျော်ရွှင်မြူးထူးစွာ သင်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။
ဗျည်းများကို ပြည့်ဝစွာ သင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်မ မိမိနိုင် ပါ။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရရင် အဲဒီစကားလုံးတွေ အကုန်လုံးကို အသံထွက်မှန်အောင် မထွက်တတ်တဲ့သူ များပါတယ်…
ဋီကာ ကို ဒီဂါ
ပဟေဠိ ကို ဘဟေဓိ
ဆိုတော့ ဒါတွေကို ပါဠိက လာတာတွေလို့ သတ်မှတ်ရင် မြန်မာစာမှာ ထားကို မထားနဲ့တော့.. အကုန်ဖြုတ်ပစ်…
မဖြုတ်နိုင်ဘူး.. ဒါကို မြန်မာဗျည်းတွေအဖြစ် လက်ခံထားရင် သူငယ်တန်းကတည်းက စသင်… ရေးနည်းပဲ မသင်မှာဆိုတော့ ဒါတွေကို ဇယားထဲမှာ ပြထားမယ့် သဘောပေါ့.. ဘာထူးလို့တုန်း… သုံးတာမသုံးတာ နောက်ထား.. သင်သာပေးလိုက်.. ဒါမှမဟုတ်လည်း သူငယ်တန်းမှာ ဘာရေးနည်းမှ မသင်နဲ့… အသံတွေကိုပဲ မှတ်မိအောင်သင်..
ဘာတွေမှန်းကို မသိဘူး… ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာပဲ…
ကိုယ်လည်း မနေနိုင်လို့ ပြောမည်။
ဗျည်း ၃၃ လုံးထဲက ၂၂ လုံး ပဲ သူငယ်တန်းမှာသင်မည်ဆိုတော့ အင်…. ဘယ်လိုပါလိမ့်ပေါ့။ နောက် ပထမတန်းမှာ ကျန်အလုံးတွေ ဆက်သင်ပါမည်ဆိုတော့ သြော်လို့ ငြိမ်နေလိုက်သည်။ နောက်မှ ဘယ်လိုများ သင်မှာပါလိမ့်လို့ စိတ်ဝင်စားမိသည်။
ဗျည်း ၂၂ လုံးကို လည်း အစဉ်အလိုက်မဟုတ်။ လွယ်ရာမှ ခက်ရာသို့ စီစဉ်ထားသည်…တဲ့။ အော်…ဒုက္ခ၊ ဒုက္ခ။ ဘယ်ဟာ လွယ်သည် ဘယ်ဟာခက်သည်၊ နောက်အလားအလာက ဘယ်လိုရှိသည်ကို သိနိုင်သော ဥာဏ်ကြီးမားလွန်းလှပါပေ့ဟုသာ ညည်းချင်တော့သည်။
မြန်မာအက္ခရာသည် အက္ခရာ သက်သက်မဟုတ်။ က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င တနင်္လာနံ၊ စ၊ဆ၊ဈ၊ဇ၊ည အင်္ဂါနံ စသဖြင့် တွဲရက်မှတ်သည်။ မှတ်ရုံနှင့် မပြီး။ ကလေးနာမည်မှည့်သည်။ အမြစ်၊ အညွန့်၊ ပဉ္စပွတ်၊ ဆပွတ်။
ဒါတင်မက ဘ၀ တလျောက်တွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုသည်။ ဥဿာ၊ စိန်ပန်း၊ ဒါန်းလှကိုရှာ၊ အောင်လံထူ စစ်သူကြီးပွဲ၊ အုန်းသီးလှည်းကြီး တို့များစီး၊ အောင်စံဖြိုး ရေချိုးရက်။
ပြောချင်သည်က မြန်မာဗျည်းအက္ခရာများသည် မြန်မာဓလေ့စရိုက်များနှင့် နက်နက်နဲနဲ ပူးဝင်ရောယှက်နေကြသည်။ ၀လုံးလေးက လွယ်သည်၊ ဂငယ်လေးက လွယ်သည်၊ ဒါကြောင့် ဒါလေး အရင် စသင်မည်ဟု မလုပ်စေချင်။ ဂရု၊လဟု အက္ခရာ သံတို သံရှည် မြန်မာပညာရှိများက သမားစဉ် စီထားပြီးသား။
န ဘယံ ဘေးမရှိသည့် ဘီလူးသုံးဆယ်နှင့် မင်းသားသုံးပါး ဇာတ်လမ်းလေးရှိသေးသည်။ မြန်မာအက္ခရာများထဲမှ လှပသော ပညာခန်းများ။ မြန်မာစကားထာများ။
ဖျက်ရသည်မှာ လွယ်ပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်တတ်ပြီထင်၍တော့ မဖျက်စေချင်။ ဘာသာစကားသည် လူမျိုး၏ အသက်ဖြစ်သည်။
စဉ်းစားမိသလောက် ၂ နည်းရှိတယ် . . .
ကလေးက အပြင်စာအုပ်တွေ လျှောက်လှန်ရင်း ဖြုတ်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို တွေ့လို့ ဒါဘာလဲ မေးရင် ဒါတွေ နောက်နှစ်မှ သင်ရမယ် . . .ခု မသိချင်နဲ့ဦး လို့ ဖြေ . . .
မဟုတ်ရင် အဲဒီ ပါဠိက တိုက်ရိုက်ယူသုံးထားတာတွေအကုန်လုံးကို လုံးဝမသုံးတော့ဘဲ မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ မြန်မာစကားလုံး စစ်စစ်တွေကိုသုံး . . .ပါဠိလိုသိချင်ရင် ပါဠိဘာသာ သက်သက်သင် . . .
ခုကျမှပဲ ကိုယ့်ဘာသာစကား ကပြားမှန်း ပေါ်တော့တယ်
ကိုယ်ဟာ ကပြားလေး ပါ။
[ လက်ရှိ facebook မှာ ပျံ့နေတဲ့ မြန်မာစာသင်ရိုး
ကောလဟာလ ကိစ္စကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာ
ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်မြင့်ဦး ရေးထားတာလေးပါ။ ]
လာမယ့် စနစ်သစ်ပညာရေးမှာ သူငယ်တန်းဆိုတာ အခုလက်ရှိ မူကြိုအဆင့်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိသူငယ်တန်းကတော့ ပထမတန်း(grade 1) ဆိုပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီစနစ်သစ်သင်ရိုးတွေအတွက် ဖတ်စာတွေပြုစုတဲ့အခါ သူငယ်တန်းအတွက် သီးခြားအဖွဲ့ က ရေးသားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူငယ်တန်းဟာ မူကြိုအဆင့်ဖြစ်လို့ဘာသာရပ်အဖြစ်နဲ့သီးသီးသန့်သန့်သင်တာမျိုး မရှိသေးဘဲ ဘာသာရပ်တွေထဲက မူကြိုအဆင့်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မယ့် သိကောင်းစရာတွေ ထည့်သွင်းထားတယ် လို့့သိရပါတယ်။
သူငယ်တန်းဖတ်စာတွေကို ဘာသာရပ်သင်ရိုးအဖွဲ့ တွေက ပြုစုတာမဟုတ်ဘဲ သူငယ်တန်း(မူကြို) သီးခြားအဖွဲ့က ပြုစုတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြုစုပြီးသွားတဲ့ဖတ်စာကို အများလေ့လာနိုင်အောင် မကြာခင်ကရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းမှာ DVB က ဖွလိုက်လို့မြန်မာစာသင်ရိုးမှာ ဗျည်း ၈လုံး ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုပြီး ပွက်လောရိုက်သွားပါတယ်။ လာမယ့် စနစ်သစ်သူငယ်တန်းမှာ မြန်မာစာဘာသာရပ်အနေနဲ့သင်ရိုးမရှိသေးပါဘူး။ မြန်မာဗျည်းအက္ခရာတွေထဲက မူကြိုအရွယ်ကလေးငယ်တွေနဲ့ သင့်တော်မယ့် ဗျည်းအချို့ ကိုထည့်သွင်းမိတ်ဆက်ထားဟန်တူပါတယ်။
ဒါကိုစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ဝိုင်းဝန်းဝေဖန်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ မြန်မာစာသင်ရိုးမှာ ဘယ်ဗျည်းကိုမှ ဘယ်သရကိုမှ ဖြုတ်မှာ ပယ်မှာ မဟုတ်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် “ကွကို” တို့“ကွီး” တို့“ညလေး” တို့ ဆိုပြီး မြန်မာစာကို ဝိုင်းဖျက်ဆီးနေကြတဲ့ ခုလိုအချိန်မှာ မြန်မာစာ ချစ်မြတ်နိုးသူတွေ၊ မြန်မာစာကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်လိုသူတွေ အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာသိရလို့ဝမ်းမြောက်အားတက်မိပါတယ်။
စိုးရိမ်ပူပန်သူတွေကိုလည်း ကျေဇူးတင်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ် မြန်မာစာမိသားစုဝင်အားလုံးအနေနဲ့ လည်း မြန်မာစာကို အစဉ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Original post – https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=833067106818880&id=100003467961345
အေးပေါ့အေ ___ ကြီးမှလက်ပေးသင်ကြပေါ့……
သုံးသုံး မသုံးသုံး ရေးတတ်တတ် မတတ်တတ် ရွတ်လိုက်ရင်
လျှောခနဲနေတာ အဲ့ဒီအရွယ်ထဲကသင်ခဲ့လို့ ဗျ…..(အဖြူထည်ဦးနှောက်ထဲဘာထည့်ထည့်ဝင်တယ်)
နောက်မှ လိုအပ်ရင် ရှာဖို့ ခက်တာလိုက်လို့ ။။။။။။။
အဲလို သင်ရိုးပြောင်းတဲ့ သူတွေက ကလေး ဘာသာ အထူး တတ်မြောက်တဲ့သူတွေလား
မြန်မာ ဘာသာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေလား မသဲကွဲဘူးး
သူငယ်တန်းသင်တဲ့ ဆရာမငယ်လေးတွေ သက်သာဖို့ လား မသဲကွဲဘူးး
သူငယ်တန်း ဆရာမတွေ သနားလို့ သူငယ်တန်းကိုပဲ ဖြုတ်မှာပါတဲ့။
နောက်တခုက ဒါဟာဆရာမတွေကို သူငယ်တန်းမှာထည့်မသင်နဲ့လို့ Teacher’s hand out မှာပြောထား
တတန်းဆရာမတွေကို ဒါတွေထည့်သင်လို့ Guide Line ပေးလိုက်ရင် ဘယ်မိဘမှကွန်ပလိန်းမတက်မှာကို သက်သက်မဲ့ ဆင်းခါနီးပွဲမဆူဆူအောင်ဖွနေတာ။
နောက်ပြီးတရားဝင်စာထဲကထုပ်တာလဲမဟုတ် တတန်းကျမှပြန်သင်မှာကို အလုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်နေတာ။ သူငယ်တန်းမှာသင်လိုက်လို့လဲ ကလေးတွေရူးမသွားသလို တတန်းမှာသင်လို့လဲပိုတော်မလာနိုင်ဘူး။ လိုအပ်ရင် အဲ့ ၃၃ လုံးစလုံးတတန်းမှစသင်လဲရတယ်။
ခ ခရေကုံးမလေးပြုံး တော်ဘီပေါ့။
အိပ်လော့, မြန်မာ !!!!
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အဲဒီစာလုံးတွေမရေးတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်ရေးပေးဖူးတာကိုတော့ မှတ်မိတယ်။ ဘယ်ကလေးမှလည်း ဒီစာလုံးတွေကို မရေးတတ်လို့ဆိုပြီး ကျောင်းမတက်ချင်ဘူးလို့ပြောတာလည်း မကြားမိပေါင်။ အချိန်တန်သူ့ဘာသာရသွားတာပဲကို။ ဘာတွေများ အဆန်းထွင်ချင်တယ်မသိ။
ဘယ်တုန်းးက ကလေးးတွေ ကို ဒီလို ဂရုစိုက်တတ်သွားးလဲ မသိပါဘူးး ညီမလေးးရယ်..
အရီးပြောတာ ဖတ်ချင်သေးတယ်။ အမတော့ ဦးပါ ဥပမာကို သဘောက မလိုသေးလို့ ဖြုတ်ထားပြီး လိုမှ ပြန်တပ်ရင် use to မဖြစ်လို့ ကသောင်းကနင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အခုလည်း သင်ရိုးမှာပါပေမဲ့ ဆရာတွေက အရေးလေ့ကျင့်ရင် အဝိုင်းလေးတွေစသင်တယ် ခက်တာကို နောက်ဆံးမှသင်တာပါပဲ။။ စာဖြုတ်တာ မဖြုတ်တာထက် သင်နည်းကို အဓိက ထားသင့်တယ် ထင်တယ်။ သည်မှာ ကလေးတွေကို A ကိုနှုတ်တိုက်မအော်ရဘူး စာလံးလေးတွေ ပြပြီး စိတ်ဝင်စားအောင်သင်တယ်။ KG စာသင်ခန်းကိုကြည့်ရတာ စာသင်ခန်းနဲ့ မတူဘူး ကစားကွင်းလိုပဲ။ အဓိက က သင်ထောက်ကူတွေ ဖြည့်ပေးသင့်တာ။ ဒါလည်း နိုင်ငံရဲ့ ကြွယ်ဝမှုနဲ့လည်း ဆိုင်ပြနွရော။ ပြောရရင် အများကြီး ကိုယ့်ထက် တ တ်တဲ့သူတွေ ပြောတာ နားထောင် လိုက် မှတ်လိုက်ဦးမယ်။
မန်မာစာမှာ ပါဠိရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ဘယ်လောက်အားကောင်းသလဲဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာကနေ တိုက်ရိုက်မွေးစားထားတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ အသံထွက်တွေကိုတောင် ပါဠိစာ ပြောင်းပစ်တယ် . . .
ဥပမာ မဂ္ဂဇင်း ဆိုတဲ့ စာလုံးကို magazine မှန်း မသိသေးခင်အချိန်အထိ အဲဒါကို မြန်မာစာ အစစ်လို့ ထင်ခဲ့ဖူးတယ် . . .
ရှိပါသေးတယ် . . . မစ္စစပီ . . . အတ္တလန္တိတ် . . အန္တာတိက . . . မစ္စတာ . . .စဉ်းစားရင် အများကြီးပဲ . . .
အဲဒီ ဥပဒေထုတ်တဲ့ ၀န်ကြီးဒေါ်ခင်စန်းရီ ၀န်ကြီးသက်တန်း ဘယ်လောက်ကျန်နေသေးလဲ။
ကို”ကကြီး” နဲ့ ခင်”ခခွေး”
ဦး”ဘကုန်း” နဲ့ ဒေါ်ဒေါ်”မ”။
စိန်” ဠကြီး”က ဆိုင်းဆရာ။
စာပေ တတ်မြောက်မှု။ ။
တကယ်က အဆင့်မြင့်ရေးသားနည်းမှာ အများကြီး စည်းကမ်းသတ်မှတ်ရဦးမယ်။ စာကြောင်းနဲ့ စကားပြော ပူးတွဲရေးနည်းမှာ တော်တော်လုပ်ရမယ်။ အဲဒီနေရာမှာ အင်္ဂလိပ်စာက ပိုစနစ်ကျတယ်။ ကျမမှာ အဲဒီကိစ္စပြောစရာ များလွန်းလို့ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ မောပြီး မပြောတော့တာပါ။